Department of Myanmar – University Of Medicine Taunggyi
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် (၂၀၁၃- ၂၀၁၄) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် – တောင်ကြီးကို (၃.၁၀.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် – တောင်ကြီး သည် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နောင်လေကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းမှာ (၄၆.၀၀) ဧက ရှိပါသည်။ ပင်မအဆောက်အဦ၊ စာသင်ဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ သူ အဆောင်များ၊ နှစ်ထပ် စားသောက် ဆိုင်ခန်းများရှိပြီး၊ ဓမ္မာရုံ၊ အားကစားရုံနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်တို့ တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက တက္ကသိုလ်အင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဆေးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ထည်ဝါနေမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၅) ခု‌မြောက် ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် – တောင်ကြီး၊ မြန်မာစာဌာနကို ကထိက/ဌာနမှူးဒေါ်နန်းတောင် ဦးစီး၍ ကထိက ဒေါ်လွင်လွင်လှိုင်၊ လက်ထောက်ကထိကများဖြစ်သော ဒေါ်စုစုမျိုးကျော်၊ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်မာ တို့ဖြင့် (၁၉.၅.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် စတင် သက်ဝင် လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါသည်။
(၁၅.၇.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာဌာနအတွက် နည်းပြအဖြစ် ဒေါ်တင်မာဦးနှင့် ဒေါ်သက်သက်ဝင်း တို့ကို ထပ်မံ ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ (၂၈.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်ဇင်မြင့်နှင့် ဒေါ်ပြည့်ပြည့်စိုး တို့ကို နည်းပြအဖြစ် ဆက်လက်ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။
ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်သင်တန်း၏ သင်ကြားရေးဌာနကြီး(၇)ခုအနက်မှ မြန်မာစာဌာနသည် Knowledge, Skill, Attitude ဟူသော စံ(၃)ရပ်နှင့် ပြည့်မီသော ဆေးကျောင်းသား/သူများအား မွေးထုတ်ပေးသည့် ဌာနကြီးတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် – တောင်ကြီး၊ မြန်မာစာဌာန၏ ပထမဦးဆုံး ကထိက/ဌာနမှူးမှာ ဒေါ်နန်းတောင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်နန်းတောင်သည် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် မန္တလေး၊ မြန်မာစာဌာန၊ ကထိက/ဌာနမှူး ရာထူးမှ ရာထူးတူ ဘေးတိုက်ဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ် တောင်ကြီး၊ မြန်မာစာဌာန သို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ယနေ့ အထိ ကထိက/ဌာနမှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
Name : Daw Nang Taung
Rank : Lecturer / Head
Degree : B.A (Q), M.A ( Myanmar )
Phone : 09-444037315
E-mail address : Z nantaung@gmail.com
Department Of Myanmar (Academic Staffs)
Name : Daw Lwin Lwin Hlaing
Degree : B.A(Hons:), M.A (Myanmar)
Phone : 09-420098808, 09-771972373
Name : Daw Su Su Myo Kyaw
Rank : Assistant Lecturer
Degree : B.A (Hons:), M.A (Myanmar)
Phone : 09-2027641, 09-762873325
E-mail address : myomyo.ygn90@gmail.com
Name : Daw Sandar Win
Phone : 09-402663218, 09-793766869
Name : Daw Kyi Kyi Mar
Phone : 09-444038925, 09-771972371
Name : Daw Tin Mar Oo
Rank : Tutor
Degree : B.A (Hons:), M.A (M.Res)
Phone : (09)262826954
Name : Daw Thet Thet Win
Degree : B.A(Hons:), M.A (M.Res)
Phone : (09)793676484
Name : Daw Pyae Pyae Soe
Degree : B.A(Hons:), M.A
Phone : 09-450082769, 09-791080907
Name : U Aung Zin Myint
Phone : 09-453185474
E-mail address : aungzinmyint1992@gmail.com
မြန်မာစာကို ဆေးပညာပထမနှစ် ဘာသာရပ်အဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတို့အား သင်ပေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ-
၁။ မြန်မာစာအရေးအသားဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များကို သိရှိနားလည်လာစေရေး။
၂။ အခြေခံ မြန်မာ့လူမှုကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို သိရှိနားလည် သဘောပေါက်လာစေရေး။
ကျွမ်းကျင်မှု( Skill )
၃။ မြန်မာစာနှင့်မြန်မာစကားကို ထိရောက်၊ မှန်ကန်၊ သိပ်သည်း၊ ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားပြောဆိုနိုင်ရေး။
၄။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာပေများ ရေးသားမှုတွင် အခြေခံရရှိစေရေး။
၅။ ဘာသာပြန် အတတ်ပညာတွင် အခြေခံရရှိစေရေး။
သဘောထားခံယူချက် ( Attitude)
၆။ ပြည်သူတို့က လေးစားထိုက်သော စိတ်နေသဘောထားများ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများ တိုးတက်မှု ရရှိစေရေးတို့
ဤရည်ရွယ်ချက်များအရ မြန်မာစာကို သင်ကြားရာ၌ သင်ကြားရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အောက်ပါအချက် တို့ကို ပြဋ္ဌာန်းစာအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
၁။ အရေးအသားနှင့် စိတ်ပိုင်းဘဝ တိုးတက်မှု ဖြစ်ပေါ်ကိန်းအောင်း တိုးပွားစေနိုင်သည့် “စကားပြေ” သင်ကြားမှု၊
၂။ စိတ်ပိုင်းဘဝ တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်ကိန်းအောင်း တိုးပွားစေရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် “ကဗျာ” သင်ကြားမှု၊
၃။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) ကို အထိုက်အလျောက် ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်နိုင်ရေးနှင့်
မြန်မာဝေါဟာရ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် “ဘာသာပြန်” သင်ကြားမှု၊
၄။ မြန်မာစာ ရေးသားရာ၌လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောစာများကို ရေးသားရာ၌ လည်းကောင်း၊
လိုရင်းတိုရှင်းနှင့် ထိထိမိမိရေးတတ်စေရန် “အနှစ်ချုပ်” သင်ကြားမှု၊
၅။ စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်စာရင်းများ၊ စာအုပ်အမည်အညွှန်းများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင်
စာအုပ်စာတမ်း များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းတတ်ရေး၊ မြန်မာအဘိဓာန်စာအုပ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖတ်ရှု
နိုင်ရေး၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှားအယွင်းများကို အထူးဂရုစိုက်လေ့လာတတ်စေရေးအတွက် “အက္ခရာစဉ်”
၆။ မြန်မာစာပေကို ရေးသားပုံနည်းစနစ်နှင့် အစီအစဉ်တကျရေးတတ်စေရန် “ရေးနည်းလေးမျိုးနှင့် စာစီစာကုံး”
၇။ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ
နှင့်လည်းကောင်း၊ ချောမောပြေပြစ်စွာ ဆက်ဆံတတ်၊ ဆွေးနွေးတတ်၊ စည်းရုံးတတ်၊ ဟောပြောတတ်စေရန်
၈။ ခွင့်စာ၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဖိတ်စာ အစရှိသည့် လက်တွေ့အသုံးပြုနေရသော မြန်မာစာရေးနည်းပုံစံများကို
၉။ သင်ကြားပြီးသော မြန်မာစာဘာသာရပ်ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် နည်းပြတန်း အချိန်များကို
စဉ် မာတိကာ သင်ကြားနည်း သင်ထောက်ကူ
ပစ္စည်း လိုအပ်သောအချိန် စုစုပေါင်း
ပို့ချခြင်း နည်းပြခြင်း ပို့ချတန်း နည်းပြတန်း
၄၁ ၄၉ ၉၀
(က) ပထမအစမ္း ၁၀%
(ခ) ဒုတိယအစမ္း ၁၀%
(ဂ) တတိယအစမ္း ၁၀%
အတန္းတင္စာေမးပြဲအေပၚ ယူေသာအမွတ္% ၇၀%
ေအာင္မွတ္ – ၅၀ မွတ္
ဂုဏ္ထူး – ၇၅ မွတ္
Moderation – ၄၆ မွတ္
စာေမးပြဲက်စနစ္ – (3F System)
Compartment System က်င့္သံုးသည္။
၇-ဘာသာေျဖဆိုရာတြင္ ၃-ဘာသာက်လ်ွင္ ေနာက္ဆက္တြဲ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္။
၇-ဘာသာေျဖဆိုရာတြင္ ၄-ဘာသာက်လ်ွင္ က်တစ္က် သတ္မွတ္သည္။
၁။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အေတြး – ဆရာေဇာ္ဂ်ီ
၂။ သူ႔အၿပံဳး – ဆရာေဇာ္ဂ်ီ
၃။ ပန္းပန္လ်က္ပဲ – ဆရာေဇာ္ဂ်ီ
၄။ ဘဝေကြ႕ဝယ္ – ေငြတာရီ
၅။ သာသည့္ေျမသို႕ – ေငြတာရီ
၆။ ေတာင့္တစိတ္ဝယ္ – ေငြတာရီ
၇။ စိတ္ – ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္
၈။ သရုပ္ျပနီတိဆရာ – ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္
၉။ ေလာကဇာတ္ခံု – ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္
၁၀။ မညိွဳးပန္းဧကန္ – ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္
၁၁။ ဂမၻီသာရ – ရွင္မဟာရ႒သာရ
၁၂။ လူမွဳက်င့္ဝတ္ဆံုးမစာ – ရွင္မဟာရ႒သာရ
၁၃။ သားေရႊဥဆံုးမစာ – ဦးပညာ
၁၄။ ၾသဝါဒထူးပ်ိဳ႕ – စိႏၱေက်ာ္သူ ဦးၾသ
၁၅။ ျမတ္ပညာ – စတုရဂၤဗလ ႏွင့္ ေနမ်ိဳးမင္းထင္ေက်ာ္ေခါင္
၁၆။ ဂီဟိဝိနယ ဆံုးမစာ – ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္
၁၇။ လမ္းညႊန္ေမတၱာဆံုးမစာ – က်ည္းကန္ရွင္ႀကီး
၁၈။ သူေတာ္စင္ – ေနမ်ိဳးမင္းထင္ေက်ာ္ေခါင္
၁၉။ သုတမၪၨဴဆံုးမစာ – ေနမ်ိဳးမင္းထင္ေက်ာ္ေခါင္
၂၀။ သူနာျပဳဘုရား – မင္းသုဝဏ္
၂၁။ သူ႔မွာတမ္း – မင္းသုဝဏ္
၂၂။ ရန္ကုန္ေဆးရံုသစ္ႀကီး၌ – မင္းသုဝဏ္
၂၃။ လယ္သမားႏွင့္ သမားေတာ္ – မင္းသုဝဏ္
၂၄။ ဇီဝက – မင္းသုဝဏ္
၂၅။ တို႔ျပည္တို႕ရြာ – မင္းသုဝဏ္
၂၆။ ေတြးမိတိုင္း – အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖ
၂၇။ ေရစီးႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ – ညြန္႔ေဝ (ကသာ)
၂၈။ သူ႔မွာအလွ အလွကိုယ့္မွာ – ညြန္႔ေဝ (ကသာ)
၂၉။ အရိုးစုႏွင့္စကားေျပာျခင္း – ညြန္႔ေဝ (ကသာ)
၃၀။ ပညာဆည္းပူးပန္းသို႔ခူး – ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္
၃၁။ ပန္းပုဆရာမ်ား၏အၿပံဳး – ျမေကတု
၃၂။ မင့္အိမ္ – ေဇာ္ဂ်ီ
၃၃။ အလွကိုယ္စီ – တင္မိုး
မွတ္ခ်က္။ ။ကဗ်ာမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ေကာက္ႏုတ္သင္ၾကားသည္။
၁။ ပညာ – ဦးပဂ်ီငို
၂။ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္း – ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္
၃။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမွဳ – ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ – အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား
၅။ ေရႊနန္္းသံုးျမန္မာသမားေတာ္မ်ား – ပါေမာကၡ ဦးခ်မ္းျမ
၆။ ဆႏၵစြမ္းရည္ – ေရႊဥေဒါင္း
၇။ ဝီရိယ – လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး
၈။ အလုပ္ – ပီမိုးနင္း
၉။ စဥ္းစားဉာဏ္ – ပီမိုးနင္း
၁၀။ ေဟာနည္းေျပာနည္း – ႀကီးပြားေရး ဦးသိန္း
၁၁။ စကားႀကီးဆယ္မ်ိဳး – စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၃
၁၂။ သူရဲေကာင္းလဂြန္းအိမ္ – ဝန္ႀကီးဗညားဒလ
၁၃။ ေဆးဆရာ – ေမာင္ထင္
၁၄။ ပညာရွိတို႔သေဘာ – ရွင္စႏၵလကၤာ
၁၅။ အေမးငါးေထြ အေျဖငါးရပ္ – ရွင္မဟာသီလဝံသ
၁၆။ ပန္းပဲရြာမွာ အပ္ေရာင္းႏိုင္ေအာင္ – သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း
၁၇။ စိတ္ေအးျခင္း – ေဇယ်
၁၈။ ဇြဲေကာင္းျခင္း – ေဇယ်
၁၉။ ေနာင္ရိုးတိုက္ပြဲ – ပညာရွိမ်ား
၂၀။ ေဒါက္တာေရွာလူး – မင္းယုေဝ
၂၁။ ပုဂံေစ်း – ေဇာ္ဂ်ီ
၂၂။ ေဆးရံုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္(သို႔)တတိယအေတြး – ေဇာ္ဂ်ီ
၂၃။ ေဆးထိုးအပ္ခၽြန္ေပးရန္ရွိသည္ – လူမ်ိဳးေနာ္
၂၄။ က်ိန္စာ – ေမာင္သစ္မင္း
၂၅။ ေယာက္်ားအမွန္ – ပီမိုးနင္း
၂၆။ စကားေျခာက္ခြန္းလူ၌ထြန္း – က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္
၂၇။ စာဖတ္သူႏွင့္ စာေပ – တက္တိုး
၂၈။ ဆရာႏွင့္တပည့္ တပည့္ႏွင့္ဆရာ – ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)
၂၉။ သတိတရား – ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္
၃၀။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္ – မင္းေဆြ
မွတ္ခ်က္။ ။ စကားေျပႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ေကာက္ႏုတ္ သင္ၾကားသည္။ ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျပင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းလိုပါက ဌာနမွဳးမ်ား ညွိႏွိဳင္းအတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္သည္။
မြန်မာစာဌာနအတွက်လိုအပ်သော ပရိဘောဂများ၊ စာအုပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် အလှ ပန်းပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ လိုက်ကာများတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကော်ဇောများခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီး သောအခါ သန့်ရှင်း သာယာလှပသည့် ဌာနအင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော မြန်မာစာဌာနကို တွေ့မြင်ရချေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ပထမနှစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများရေးဆွဲရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ၊ ကျောင်းဖွင့်ပွဲအတွက် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များလာရောက်တွေ့ဆုံ၍ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်အောင် ကျင်းပနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှုများနှင့် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာကြီး ဒေါက်တာဝင်းဌေးအောင်၏ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ဖွင့်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီတွင် မြန်မာစာဌာနမှူးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဌာနရှိ ဆရာ /ဆရာမများက အခမ်းအနားမှူး၊ အမွှေးနံ့သာဖလားကိုင်နှင့် ကျွေးမွေးရေးတာဝန်များကို ကျရာတာဝန်မှ စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီးကို (၁၃၇၇) ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် (၅) ရက်၊ စနေနေ့ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်ဂုဏ်ဆောင် တောင်ကြီးဆေးတက္ကသိုလ်ဖွင့်ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်၍ ဆေးတက္ကသိုလ် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ကမ္ပည်းမော်ကွန်းအား စက်ခလုပ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပျိုဖြူများအဖြစ် တင့်တယ်နေသည့် အခမ်းအနားမှူးများ၊ ဖဲကြိုးကိုင်၊ ဗန်းကိုင်၊ ပူဖောင်းကိုင်၊ နံ့သာဖလားကိုင်များမှာ ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၊ ပထမနှစ်ဌာနများမှ ဆရာမ များသာ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကျောင်းလုံးရှိ ကျန်ဆရာ/မများမှာလည်း ဒူးနားချိတ်၊ အပေါ်ကုတ်အင်္ကျီအနက် ဆင်တူဝတ်စုံများဖြင့် လှပတင့်တယ်နေကြပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီးတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသော ဆရာ/ဆရာမ အသစ်များအတွက် သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ၊ ဆရာ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်အတွက် Awareness Raising Workshop on Educational Science for Newly Appointed Teachers ကိုလည်း (၁၀.၁၂.၂၀၁၅) မှ (၁၁. ၁၂. ၂၀၁၅) အထိ ဖွင့်လှစ်ရာ မြန်မာစာဌာနမှ ဆရာ/မများလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီး၊ ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၅) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် သင်ကြားရေး ဆိုင်ရာများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများကို (၇.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် စတင် လက်ခံ ခဲ့ပါသည်၊၊ (၂၁.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြီး သင်တန်းကို စတင်ပို့ချ သင်ကြားပါသည်။ အထူးဒေသဖြစ်သည့် (ဝ၊ ကိုးကန့်၊ ပအိုင့်ဝ်၊ ပလောင်၊ ဓနု) ဒေသတို့မှ ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၁၅၃) ဦးကို လက်ခံသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၊ စာပေနှင့် မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ နှင့် ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် မြန်မာစာဌာနမှူးက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာပေတည်းဖြတ်ရေး ဆပ်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပြီး မြန်မာစာဌာနရှိဆရာ/ဆရာမ များမှာလည်း စာပေတည်းဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီတွင် စာပေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့က ပေးပို့လာသော စာမူများကို ရွေးချယ်တည်းဖြတ် ကြရပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး (၁၂/၂၀၁၅) ပထမနှစ်ပုံမှန်သင်တန်း၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပါဝင်ကြပါသည်။
(၃.၁၀.၂၀၁၆) မှ (၁၀.၁၀.၂၀၁၆) အထိ ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၅) သင်တန်း၏ (ပုံမှန်) စာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ စာစစ်ကြပြီးနောက် ပြင်ပစာစစ်အဖွဲ့ဝင်များကို ရှမ်းပြည်နယ်၏ အမှတ်တရနေရာ များသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လာမည့်စာသင်နှစ်အတွက် သင်ခန်းစာများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ကြိုတင် ပြင်ဆင်ကြပါသည်။
(၁၉.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၊ ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၆) သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်၍ မြန်မာစာဌာနမှူးက ကျောင်းသား/သူ အသစ်များကို ကြိုဆိုပြီး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပသော ၂၀၁၇ ခုနှစ် (၆၉)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို စာပေဟောပြောပွဲသို့ ဆေးတက္ကသိုလ် – တောင်ကြီး၊ မြန်မာစာဌာန မှ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ ပါဝင်တက်ရောက်ကြပါသည်။
(၁၆.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၆) သင်တန်း၏ “မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲ” နှင့် “ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ” အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသား/သူ များကို ပါမောက္ခချုပ်ကြီးနှင့် ဌာနမှူးများကဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီး၊ စာပေနှင့်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် စာရေးဆရာ လင်္ကာရည်ကျော် ၏ “ဆေးလောကနောက်ခံ ဝတ္ထုသုံးပုဒ်” စာပေဟောပြောပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ (၁.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ Lunch Time Talk တွင် ပါမောက္ခ ခင်မောင်ထူး(အရိုးအထူးကု) ၏ Integrated Curriculum in Medical Education ဟောပြောပွဲကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
တက္ကသိုလ်အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အကြမ်းဖျင်းသုံးသပ်ရာတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုပီပြင် ထိရောက်ပြီးအချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြုစုတင်ပြရန် ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီး၏ သမိုင်းကြောင်း ပြုစုရေးအဖွဲ့တွင် မြန်မာစာဌာနမှူးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရ၍ ၂၀၁၁-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ နှင့် ၂၀၁၅ – ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွက် ကဏ္ဍကြီး (၆) ခုခွဲ၍ မှတ်တမ်းပြုစု ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။
အုပ်ထိန်းသူစနစ်ဖြင့် အနီးကပ်ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာစာဌာနအနေဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၊ ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၅) သင်တန်းတွင် ခုံအမှတ် (၁) မှ (၁၉) အထိ၊ (၁၂/၂၀၁၆) သင်တန်းတွင် ခုံအမှတ် (၁) မှ (၂၇) အထိနှင့် (၁၂/၂၀၁၇) သင်တန်းတွင် ခုံအမှတ် (၁) မှ (၃၁) အထိ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ အနီးကပ်ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာစာဌာနအနေနှင့် သင်ကြားပြီးသော သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် နည်းပြတန်းအချိန်များကို သောကြာနေ့တိုင်း ပြုလုပ်စစ်ဆေး ပေးပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၊ ပထမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်(၁၂/၂၀၁၇)သင်တန်းတွင် Pilot Phase ကို မတ်လ (၅) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ကြရာ မြန်မာစာဌာနအနေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းစာများအပြင် မသင်ကြားဖူး သေးသော unseen ဆောင်းပါးများဖြစ်သည့် ဆရာမဒေါ်ခင်စောတင့်၏ “အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့သူဆိုတာ”၊ ဆရာမုံရွာဝင်းဖေ၏ “ဘဝခရီးလျှောက်ကြရာဝယ်”၊ ဆရာဦးတင့်ဆွေ၏ “ဆင်းရဲသား” ဆောင်းပါးများကို small group များခွဲ၍ အရေးအသား အတင်အပြ ကောင်းမွန်မှုအတွက် အရေးစွမ်းရည်၊ တစ်ဦး (၅)မိနစ်စီဖြင့် နှုတ်မှုစွမ်းရည်တို့ကို ကျောင်းသား/သူ တစ်ယောက်စီတိုင်း ဖြေဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
စာပေနှင့်အနုပညာအသင်းမှ ဦးစီး၍ ဆရာဝန်စာရေးဆရာကြီးများ၊ နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးများကို ဖိတ်ခေါ်၍ စာပေပြုလုပ်ရန်၊ ကျောင်းတွင်းနံရံကပ်စာစောင်များ၊ ပိုစတာပြိုင်ပွဲများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ရန်ရှိပါသည်။
နှစ်စဉ် ဆေးတက္ကသိုလ်-တောင်ကြီး၏ ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေသော မဂ္ဂဇင်းများလည်း စီစဉ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။